FAKIOLTE SIANSA ANTANANARIVO : Mpampianatra maherin’ny 15 voan’ny coronavirus
Mihanaka ny valanaretina covid-19 eny amin’ny Anjerimanontolo. Araka ny fanambaràna nataon’ny filohan’ny Seces, sampana Antananarivo, ny Profesora Sammy Grégoire Ravelonirina, hita sy voaporofo ny fisian’io aretina io eny Ankatso. 25 mars 2021
Mpampianatra maherin’ny 15 ao amin’ny fakiolten’ny Siansa no voamarina fa nifindran’ny aretina amin’izao fotoana. Noho izay antony izay, nanapa-kevitra ny hampiato mandritra ny roa herinandro ny fampianarana ao amin’ity sampam-pianarana ity ny filan-kevitra siantifika. “Tsy maintsy mandray fepetra mifanandrify amin’ny zava-misy izahay, tompon’andraikitra voalohany izahay mpampianatra ary manan-kasina loatra ny aina sy ny fahasalamana. Ao anatin’ny vatana tomady no misy ny saina mahiratra”, hoy ny Profesora Sammy Grégoire.
Mbola ao amin’ity sampam-pampianarana voalaza ity aloha hatreto no nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fampiatoana mandritra ny tapa-bolana ny fampianarana. Malalaka amin’ny fanapahan-kevitra raisiny kosa ny fakiolte hafa, hoy ny voalaza, saingy entanina ny rehetra samy ho tompon’andraikitra hisorohana ny fiparitahan’ny aretina amin’ny samy mpianatra.
Nilaza koa ny Seces sampana Antananarivo fa noho ireo toe-javatra naterak’ity valanaretina ity dia heverina ny hisian’ny fihemoran’ny taom-pianarana. Marihina fa ny enim-bolana faharoa ho an’ny taom-pianarana 2019-2020 no vitain’ny mpianatra amin’izao fotoana.
Efa nanomboka herinandro vitsy izany ho an’ny fakiolten’ny Siansa saingy izao tsy maintsy naato izao aloha. “Mino sy manantena izahay fa handray andraikitra ny Minisitera manoloana izao toe-java-misy izao. Tokony hitandrina sy ho hentitra ny fianakaviamben’ny fampianarana ambony hanatanteraka ny fepetra sakana rehetra”, hoy hatrany ny fanambaràna. Ankoatra ireo mpampianatra 15 efa voamarina fa voan’ny aretina, nisy koa ny fanaovana fitiliana faobe ho an’ny mpampianatra sy ny mpandraharaha rehetra tao amin’ny fakiolten’ny Siantsa, omaly. Olona 75 no natao fitiliana ary afaka telo andro vao ho azo ny valin’io. Miezaka mampanaja ny fepetra sakana rehetra ho an’ireo olona mifamezivezy eny amin’ny anjerimanontolo ny Seces sy ny oniversite, raha ny fanazavana hatrany, saingy nambaran’izy ireo fa mampitombo ny tsy fahafahana manaja ny fepetra sakana ny fivezivezena ivelan’ny toeram-pianarana toy ny any amin’ny fitaterana sy ny any an-tranon’ny tsirairay.
Marihina fa mahatratra hatrany amin’ny 1 500 isa ny mpianatra iray kilasy amin’ny taona voalohany eny amin’ny oniversite. Tsy nisy ny fananganana fotodrafitrasa vaovao hatramin’izao kanefa ny fepetra covid-19 tsy ahafahana mandray ireo mpianatra ireo miaraka.
Nanameloka ny fomba fandaminana ny fitsinjarana vatsim-pianarana farany teo koa ny seces nandritra ny fanambaràna nataon’izy ireo : “Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra rehetra mba tsy hiseho masoandro ety anivon’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa intsony ny endrika fanosihosena ny “franchise universitaire, ny fampijaliana sy ny fampandadiana ireo mpianatra mandritra ny fandraisany ny vatsim-pianarany, noho ny tsy fetezan’ny fandrindrana ny fitsinjarana an’izany”, hoy ny voalazan’ny fanambaràna.